Ministeera Saayinsiifi Barnootaa Olaanoo: 'Barattoonni barachu kan danda'an yunivarsitii itti ramadaman qofatti' - BBC News Afaan Oromoo
Ministeera Saayinsiifi Barnootaa Olaanoo: 'Barattoonni barachu kan danda'an yunivarsitii itti ramadaman qofatti'
Image copyright Feesbuukii/FDRE Ministry of Education
Goodayyaa suuraa Gamoo Ministeera Barnootaa
Kaleessa Biiroon Barnoota Naannoo Tigraayi barattoota barana yunivarsitiitti ramadaman gara Naannoo Amaaraatti hineergu jedheen walqabatee Ministeerri Saayinsiifi Barnoota Olaanoo kana jechuun biiroon barnoota naannoo aangoo hin qabu jedheera.
Ministeerichi BBC'tti akka himeetti, barattoota kan ramadee dhaabbata Qorannoowwan Biyyaaleessaatti malee naannoo miti.
Daareektarri Dhimmoota Kominikeshinii Ministeera Saayinsiifi Barnoota Olaanoo Obbo Dachaasaa Gurmuu BBC'tti akka himaniitti, waltajjiiwwan ibsichaan dura turan irratti naannichaa irraa deddeebiin gaaffii kaa'aa akka ture dubbatu.
Itti gaafatamaan Biiroo Barnoota Naannoo Tigraayi obbo Gabra Masqal Kaahisaayi kaleessa akka dubbataniitti ''Yunivarstiiwwan eenyummaa bu'urreeffachuun miidhaa keessatti raaawwatamaniifi naannoo itti gaafatamummaa hinfudhanneetti barattoota haaraa ramadaman akka hinergine ejjannoo naannichaati,'' jedhanii turan.
Tigraay barattota yunvarsiitii Amaara keessa jiranitti akka hin ergine beeksise
Haaluma kanaanis, ejjannoo naannichaati kan jedhan barattootta 600 ta'aniif bara kana yunivarsitoota Naannoo Amaaraa keessatti argamanitti ramadaman akka hinergine qaama motummaa federaalaa dhimmisaa ilaalatuutti beeksisuu ibsaniiru.
Obbo Dachaasaan BBC'tti akka himaniitti, Biiroo Naannoo Tigraayi waliin dhimmicharratti irrra deddebiin mari'ataniiru. Amma nageenyi yunivarsitoota naannooleetti argaman keessa jiru amansiisaa waan ta'eef barattoonni garas deemuun akka baratana akka barbaadan dubbataniiru.
''Nuti barattoonni hunduu gara yunivarsitii itti ramadaman dhaquun akka baratan amantaa qabna,'' kan jedhan itti gaafatamaan kuni, yunivarsitoonni guutuu biyyaa keessa jiran itti waamamni isaanii kan motummaa federaalaa waan ta'eef biirooleen naannooleetti argaman ajaju hindanda'an jedhaniiru.
Itti gaafatamaan Biiroo Barnoota Tigraayi itti dabaluun akka jedhaniitti barattoonni dhaabbilee barnootaa Naannoo Amaaraa keessatti argamaniitti ramadaman kuma lamaa oli akka ta'aniifi haasaa qaamoolee dhimmisaa ilaalattu waliin taasifameen lakkoofsi kun gara 600tti gadi buufamu ibsaniiru.
Yaada Naannoo Tigraayiin dhiyaateerratti hundaa'uunis Ministeerri Saayinsiifi Barnoota Olaanoo barattoonni yunivarsitoota naannoolee adda addaa keessatti argamaniitti ramadamaniiru. Isaanis bakka itti ramadaman deemuun barachu qabu jedhaniiruu.
Obbo Dachaasaan akka jedhaniitti, ''wayita dhimmi ispoortiifi barnootaa ka'u hunda naannoolee lamaa jidduu qaawwii akkanaa ni jira,'' jechuun yaadni karaa Tigraayiin dhiyaatees ''hojiirra hinolchinu, ta'uus hinqabaatu,'' jedhaniiru.
Dhaabbileen barnoota olaanoo Naannoo Tigraayi ta'e kanneen naannoolee biraa keessatti argaman ijoollee kanneen simachuun hinkessummeessan kan jedhan ittigaafatamaan kun, ''kan taasisuuf hinqaban'' jechuun jala murun himaniiru.
Sababii saas yoo eeran ''yunivarsitoota Naannoo Tigraayis ta'ee kan naannoolee biraatiif haaluma dandeettii simachuu danda'aniitiin barataan ramadameefiira. Kanaafu, barattoota dabalataa simachuuf dandeettiis ta'e bajatas hinaqaban,'' jedheera.
Yunivarsitoota keessatti nageenyi walitti fufiinsa qabu akka jiraatu taasisuuf hawaasa waliin walitti dhihaannee hojjataa jirra kan jedhan Obboo Dachaasaan, haalli hanga ammaatti jiruus gaarii ta'u himaniiru.
Haalli simannaa fooyya'es barattootaaf taasifamaa jira kan jedhan Daarektarri Komunikeeshiin kun, koreen miseensa isaa dhaabbilee amantaa, jaarsolii biyyaa, miseensoota hawaasa naannoo hammate hundeeffamuun miira maatiitiin barattoota simataa jiraachu ibsaniiru.
Naannoon Tigraay barattota yunvarsiitii Amaara keessa jiranitti akka hin ergine beeksise
Ministeera Barnootaa: 'Dhimma afaanii irratti wanti murtaa'e hin jiru'
Qabxii barnootaa, iddoo itti qo'atanii fi deggersa maatii-seensa yuunivarsitiif
MM Abiy Ahimad addatti koree hoji raawwachiiftuu 'TPLF' dubbisuufi
Dimokiraatotni akeekkachiisa Obaamaaf deebii kennan
Aanga'oonni siyaasaa Awustiraaliyaa Chaayinaarraa ittifaman
Garraamummaan umurii dheeraa jiraachuuf nama gargaaraa?
Daandiiwwan gurguddoo balaan tiraafikaa irraa hin fagaanne